Kugxekwe uDlamini ngokucela ukuba kuxolelwe abathintekayo kolwe-State Capture | News24
Kugxekwe uDlamini ngokucela ukuba kuxolelwe abathintekayo kolwe-State Capture
Cape Town - ISouth African National Civic Organisation (Sanco) ngoMsombuluko ithe ishaqekile ngamazwi kaNgqongqoshe wezokuThuthukiswa koMphakathi ophinde abengumholi we-African National Congress Women's League (ANCWL) uBathabile Dlamini.
UDlamini uthe kumele baxolelwe abathinteka odabeni lwe-state capture ngendlela efanayo naleyo okwaxolwa ngayo ngobandlululo.
"Sethemba ukuthi umbono kaDlamini akuwona owe-ANCWL noma abanye abaholi okungenzeka bakhethwe engqungqutheleni eqhubekayo ye-ANC eNasrec ngoba uyaphikisana nokushiwo yi-ANC uma ithi izimisele ngokuqeda inkohlakalo,” kusho okhulumela iSanco uJabu Mahlangu.
OLUNYE UDABA: Kuboshwe amadoda atholakale nesibhamu esebiwe kwimkomfa ye-ANC
ISanco ingenye yezinhlangano ezidlelana ne-ANC.
Engxoxweni abenayo neNews24, uDlamini uthe: "Abantu baseNingizimu Afrika kungani bengaxoleli?”
Ubebuzwe umbuzo ngokwehluleka kwe-ANC ukuthathela izinyathelo abathintekayo kuma-email aputshuka athinta nomndeni wakwaGupta.
UMahlangu uthe i-ANC kumele iziqhelelanise nokushiwo uDlamini.